Ciyaaraha Soomaalida | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Ciyaaraha Soomaalida
Ciyaar yahan ka tirsanaa Jeenyo oo Muqdisho ku geeriyooday.
Ciyaar yahankii hore ee kooxaha Elman & Olymbic Fitness Center (O.F.C) una soo ciyaaray xulka qaranka dalkeena Daahir Maxamed Muqtaar ayaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Muqdisho. Daahir ayaa kamid ahaa kooxda Jeenyo waxaana uu ku geeriyooday qarixii ka dhacay Muqdisho gaar ahaan nawaaxiga Dekedda Weyn ee Muqdisho. Daahir Maxamed Muqtaar waxa uu kamid ahaa ciyaar ...
DHAGEYSO : Ciyaar yahanada kooxaha dalka “Waxaan tacsi udireyna Bariga Dhexe & Elman”.
Shalay gelinkii dambe ayay aheyd markii koox hubeysan oo gaari la socday ay rasaas ku fureen gaari kale oo ay la socdeen ciyaar yahano ka tirsan heerarka kala duwan ee dalka & macalimiin kubadda cagta ah. Macalin ku xigeenkii kooxda Bariga Dhexe Macalin Yuu ayaa ku geeriyooday weerarkaas waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray 2 ciyaar yahan oo ka ...
Dhageyso: Gaari ay wateen ciyaartoyda Elman FC oo la weeraray
Wararka naga soo gaaraya duleedka Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rag hubeysan ay weerareen gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen Ciyaartooy katirsan Kooxda Kubada cagta ee Elman FC. Rasaas la huwiyay gaariga ayaa waxaa ku geeriyooday Macalin xigeenkii Kooxda Bariga dhexe oo magaciisa lagu soo koobay Yuu, halka ay ku dhaawacmeen laba ciyaaryahan. Ciyaaryahanada dhaawaca ah ayaa kala ah; ...
Banaadir iyo Heegan oo bar-baro ku kala baxay. Banaadir horyaalka weli loogama adkaan
Garoonka Banaadir Stadium dagmada C.casiis waxaa galabta kuwada kulmay kooxaha Banaadir iyo Heegan ciyaar ka tirsaneyd kulamadii 3-aad ee horyaalka heerka 1-aad ee dalkeena. Naadiga Banaadir oo xagaagii hore horyaalka ku qaaday Rikoor iyaga oo aan kulan xitaa laga adkaan ayaa weli sii wata bandhigooda waxaana galabta ay mar kale bar-baro la galeen kooxda Booliska ee Heegan. Kooxda ayaa kulankii ...
Kooxaha Jeenyo iyo Dekedda oo bar-baro ku kala baxay.
Maanta ayaa dib loo ambaqaaday horyaalka heerka koowaad ee dalkeena waxaana galabta Muqdisho lagu ciyaaray Labo kulan oo kamid ah Kulamada 3-aad ee horyaalka xilli ciyaareedka 2016 – 2017. Kulan xiiso badan ayaa garoonka Jaamacadaha degmada Hodan waxa uu ku dhex maray kooxaha Jeenyo iyo Dekedda waxaana ciyaarta xiiso uyeelayay shumicii hore ee kooxda Jeenyo oo galabta ka hor yimid ...